Blackberry tea: Gịnị ka ọ bụ? Olee uru ọ bara? Esi kwadebe?
ahụ ike	 23 December 2018
Tea na-anara ndu ndi Brazil choro inwe ndu nke ndu kwa ubochi, karie ogwu, nri na adighi nma na ndu ndi na adighi nma. Otu n'ime ha nke ghọrọ akụkụ nke usoro ihe omume nke ndị Brazil siri ike bụ tea blackberry.
Blackberry tea dị mma maka ahụike, maka igbochi ọrịa, maka ime ahụike gị. N'isiokwu ndị na-esonụ ị ga-amụta maka uru ndị bara uru na tii a, yana ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara ya. Lee!
Gịnị bụ blackberry tea maka?
Black tea, nke mbụ, bụ ihe na-atọ ụtọ. Nke ahụ na-eme ka ọ baa uru ịnweta otu iko ma ọ bụ abụọ nke ihe ọ drinkụ drinkụ a otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu. Ma na mgbakwunye na ọ tọrọ ụtọ, ọ nwekwara ọtụtụ uru ahụ ike.
Blackberry tii bara ọgaranya nke ukwuu calcium, nwere ihe karịrị okpukpu 22 okpukpu nke mmiri ara ehi nwere. Nke a na-eme nke a bụ isi uru tii. Dịka ọmụmaatụ, maka ahụike nwanyị, nri ndị a na-edozi mulberry bụ ihe dị ukwuu maka ibelata nhụjuanya nke nwoke na-eme ka mmetụta nke esemokwu premenstrual belata.
The blackberry tea dikwa ugbu a na ahu ike ndi mmadu. Ọ dị mma maka ndị nwere mgbanwe na ụra, nchegbu, ịda mba na ndị ọzọ.
Ma, n'ezie, ọ magburu onwe ya maka ahụike ọkpụkpụ. Site na calcium ahụ dum, ọkpụkpụ gị ga-adị ike, gbasie ike, kwadebere iji guzogide ndụ na-agwụ ike na ndụ kwa ụbọchị nke ọtụtụ mmadụ.
Miura bụ ụdị blackberry nke ndị masịrị ma na-achọ inweta ndụ ahụike na ahụike karịa ka ejiri mee ihe n'ụdị tii.
Miura dị oke na okwu gbasara ahụ ike ụmụ nwanyị, cramps, PMS, libido n'onwe ya ma na-arụkwa ọrụ na nsogbu nwoke na nwanyị: okpomọkụ, ọsụsọ, mgbakasị, nrụgide, isi ọwụwa, wdg.
Na mgbakwunye, tii Miura kranberị dị mma maka ọbara mgbali elu, ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke akụrụ na imeju, ọ bụkwa nnukwu mgbochi mkpali.
Mkpụrụ kranberị ọ na-eme ka ị ghara ibu ibu?
Otu n'ime omume nke black black tea bụ ime ka ị gbanwee ihe ọalthụ unụ na-adịghị mma na caloric nke tii na-adịchaghị caloric ma dịkwa mma. Nke a ga - eme ka ị gbanye calorie pere mpe, kwụsị bloating nke oke sodium na - eweta, na nkenke, ndị a bụ omume ga - eweta ọnwụ.
Na blackberry tea emere maka nke ahụ. Kama ị drinkingụ mmanya soda, ihe ọ alcoụholicụ na-egbu egbu, ma ọ bụ ọbụna ihe ọ ,ụ juiceụ dị ụtọ, na-ahọrọ tii blackberry, nke bụ uto, oyi-oyi, na-atọ ụtọ na caloric dị obere.
Nke a ga - ewetara gị ahụike karịa ma, n'otu oge ahụ, nyere gị aka tufuo kilogram ole na ole. Ha niile jikọtara ya na nri dị mma, nke kwesịrị ekwesị na mmega ahụ, na mgbakwunye na ị drinkingụ ọtụtụ mmiri kwa ụbọchị.
Kedu ihe ọ bụ maka hibiscus?
Hibiscus bụ tii ọzọ malitere ịmị ọtụtụ, tumadi n'ihi mmetụta dị nro, nke iwepu sodium, nke na-egbochi onye nwere ndụ na-enweghị isi ma nwee nri na-ezighi ezi.
Nwere ike were ngwakọta nke abụọ, mana ọ dịghị mma iji overdo ya nke ukwuu na hibiscus. Ọ nwere ụfọdụ mmetụta ọ kachasị, ọkachasị ụmụ nwanyị. Yabụ, were obere hibiscus na obere oge kwa izu iji zere inwe nsogbu ọmụmụ na ndị ọzọ metụtara ahụike ụmụ nwanyị.
Gịnị bụ uru nke blackberry tea?
Isi uru nke blackberry tea dị na ngwakọta nke nri ya. Dị ka o nwere ọtụtụ calcium, nke a dị mma maka okwu ọkpụkpụ, mana ọ gafere nke ahụ.
Blackberry na-emekwa ihe gbasara ahụ ike ụmụ nwanyị, na ịnagide mgbaàmà nke PMS na menopause. Ọ dị mma maka ọgwụgwọ hemorrhoid, ahụike anụ ahụ, afọ ọsịsa, mma ụra, nchekasị na ịda mbà n'obi, yana nwekwara ọrụ antioxidant, nke na-eme ka imeju na akụrụ mma.
Ọ na-enyere ntutu isi aka?
Blackberry tea na-ewusi ihe ndị mejupụtara collagen dị na ahụ mmadụ na otu n’ime ha bụ ntutu. Nke a nwere ike inye aka wusi wires, na ogo ha ma nwee ike igbochi ntutu isi, dabere na ihe kpatara ọdịda a.
Blackberry tea nwere nsogbu ọ bụla?
Ihe ọ bụla karịrị akarị dị njọ. Yabụ, nke kachasị mma bụ ịmegharị tii otu ụbọchị ka ị ghara ị drinkụ otu ihe kwa ụbọchị yana oke ego.
Consumption consumptionụbiga blackberry tea na-egbu egbu na ahụ, nwere ike ibute nsogbu nke afọ, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, afọ mgbu na imeju imeju. Ya mere, rie ya otu ugboro n’ụbọchị, ugboro abụọ n’izu, n’agbanyeghi otu iko ma ọ bụ abụọ, na-ekwubigaghị okwu ókè ka ị ghara inwe mmetụta dị iche dịka echere gị.
E mepụtara Max Amora ọkachasị maka ụmụ nwanyị ahụ enweghị ike ịnagide nsogbu nke menopause. Ya mere, site na ụdị 100% nke okike na enweghị mmetụta ọ bụla, ọ bụ mgbakwunye na capsules nke na-eme ihe megide mgbaàmà nke menopause, yana ọnwụ ọnwụ, na-agbalite metabolism.
Site na calorie ole na ole, blackberry bụ ọtụtụ vitamin dị ka: A, K, B na E. Na nke a, n'ihi oke ihe ịtụnanya ya, ọ na - enyere aka melite nguzogide, na - eme ihe megide ọrịa na - enyere aka na ibugharị oxygen n'ọbara.
N'ezie na-arụ ọrụ? Kwesịrị ya?
Ee! Max Amora bara ezigbo uru maka gị ndị na-ata ahụhụ site na nsị nke menopause na, na mgbakwunye, na-eme ka metabolism na-ebuwanye ibu ma na-efulata n'ụzọ dị mma. Na nke a, ọ nwere ike belata okpomọkụ, ọkụ ọkụ, na-alụ ọgụ ehighị ụra nke ọma, belata nrụgide ma melite libido na ọnọdụ.
Ọzọkwa, ọ bụ naanị 100% ngwaahịa okike na-enweghị mmetụta ma ọ bụ mmegide na-enyere aka nke ukwuu na nchịkwa hormonal, na-alụ ọgụ na nsonaazụ nke menopause. Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ma zụta Max Amora gị ugbu a!
Ọ bụrụ na ederede ederede banyere masịrị blackberry masịrị gị, kekọrịta ya na netwọkụ mmekọrịta gị!
Akwa nri: Nke a bụ otu esi eme yana menu echiche iji! Lelee!
Manthus: Chọpụta ihe usoro a ga-emere gị!